Dhoohanaanta Absame iyo Dhul balaarsiga beelaha iyo kooxaha shaarka diinta huwan ee ku soo duulay gobalada Jubboyinka,(Warbixin Muhiim ah) | waamonews	Home
Thursday, February 2nd, 2012 | Posted by editor Dhoohanaanta Absame iyo Dhul balaarsiga beelaha iyo kooxaha shaarka diinta huwan ee ku soo duulay gobalada Jubboyinka,(Warbixin Muhiim ah)
Dhoohanaanta Beelaha ku Abtirsada gobalada Jubboyinka ee Absame iyo Adeerkood iyo dhulbalaarsiga ay deegaanadooda ka wadaan Beelaha dhulboobka ah ee haatan huwan magaca Alshabaab. Sidaad la socotaan gobalada Jubboyinka 20-kii sano ee la soo dhaafay waxaa ku hardamayey hogaamiya kooxeedya ka soo duulay gobalada dhexe iyo Bari.
Dadka u nasab sheegta gobalada Jubboyinka 20-tan kaasi sano waxay ahaayeen sacabooley iyo looma ooyaan oo uu utaliyo hogaamiya kooxeed kasta oo qabsada magaalada Kismaayo ee xarunta gobalka Jubada hoose. Dhamaan kooxaha ku soo duulay Jubboyinka magacaay doonaanba ha wataane, Waxay ka sinaayeen nidaamka dhul boobka. Tusaale Isbaheysigii Dooxada Jubba ee ka soo duulay gobalka Galgaduud kumanaan qoys ayay soo dejiyeen soo dejiyeen gobalada Jubboyinka 7 sano ee ay xooga ku heysteen Kismaayo.
Meelaha sida sida ba’an ay u degeen oo ay gabi ahaanba ka barakiciyeen dadkii deegaanka waxaa ka mid ah deegaanada loo yaqaano gosha, Degmada Jillib,Goobweyn,Jamaame, guud ahaan dhulka loo yaqaano dhasheeg waamo ee u dhaxeeya Afmadow ilaa Jilib , Kismaayo ilaa Jilib,Afmadow ilaa Kismaayo , Sidoo kale dhul xeebeedka u dhaxeeya Kismaayo ilaa Raaskaamboni.
Kooxda Alshabaab oo kaba sii daran ayaa ku xigte , Maxaa yeelay Alshabaab waxaa ku bahoobay qabaa’ilo badan , oo dhamaantood damac ka hayo qabsashada gobaladan dayacan ee kheyraadka dhex ceegaagaya, dadkii u nasab sheeganayana ay noqdeen , mid dhumay, mid dhoohan iyo mid dhuuni qaate ah oo dhulka dhaqaala yar dhaafsanaya.
Alshabaab Intii ay dhulka qabsadeen Jubboyinka gobalka Jubada hoose oo keliya waxay ka aas-aaseen 90 kaam oo la dejiyay mid kiiba in ka badan 1000-kun qoys oo laga soo daabulay ,Gobalada dhexe, Baay , qeybo kamid ah Gedo, Shabeelada hoose,Banadir. Intaas waxaa sii dheer Magaalada Kismaayo oo keliya waxaa ku yaalaa 53 kaam oo aan ku jirin 90-shan kaas kaam.
Inta u dhaxeysa Kismaayo iyo Raskamboni iyo Dhoobley waxay Alshabaab ka aas-aaseen 65 -kaam oo midkiiba la dejiyay 1000-kun qoys. deegaana Gosha loo yaqaano ,gaar ahaan degmada Jilib iyo Mareereey waxay ka sameeyeen 25 – Kaam .
Degmooyinka Salagle, Saakoow iyo tuulooyin hoos yimaada degmada Bu’aale iyagu waxayba qarka u saaran yihiin in ay ka soo dabar go’aan dadki deegaanka, waxaaba gabi ahaanba lagu beeray dad inta badan laga Keenay deegaanada fog fog ee Gedo iyo Baay.
Intaasi oo keliya kuma ekee khatarta ugu weyn waxay tahay In dadkaasi ay xaalufiyeen oo ay diirteen dhamaan dhirtii iyo duur joogtii gobalka ku nooleed. Tusaale deegaanka JOORE waxaa ku yaalay Kheymaha ugu waaweyn ee geeska Afrika, Maantana waxuu isu bedalay dhul banaan oo isha kugu daali lama degaan ah, 65-ta Kaam ee ku yaala Joore dadka ku dhaqan dhamaantood noloshooda waxay ku tiirsan tahay jarista dhirta, Waa dad gobala fog fog ka yimid oo u soo shaqa tagay sharista Keymaha Jubboyinka, reerahoodi iyo aheladoodina waa ay soo rarteen.
Wax yaabaha ugu yaabka badan waxaa ka mid ah halkii qoysba waxuu leeyahay ilaa 4 Gaari oo kuwa xamuulka ah oo looga Keenay Dubai, Gawaaridaasi waxaa lagu daabulaa dhuxusha qoys kastana subax walba wuu ku shaqa tagaa.
Mashiina waaweyn oo geedaha lagu jarana wey haystaan. Deegaanka Kudhaa oo keliya meelaha Dhuxusha lagu Keydiyo , Waxaa la sheegay in ay tahay dhul dhan 3 KM oo isku weer ah. Buurgaabo indhahiina waad ku aragteen , Kismaayona waa la mid.
Duur joogti uu gobalka hodanka ku ahaa waa la xaalufiyay, dhulka waxaa yimid dad diirata ah oo xitaa cunaya MULUCA ugaadhii kale warkeeda daa , Duurjoogti mid la dabto iyo mid la dhoofiyo ayaa laga dhigay.
Ganacsiga iyo dhaqaalaha. Ganacsigi iyo dhaqaalahii intuba Waxaa gacanta ku hayaa kooxahan gobalkan ku soo duulay,Dhamaan Gawaarida xamuulka ah ee ka shaqeysa gobalada Jubboyinka ee badeecada ka Keena Muqdisho ama meelaha kale ee gobalka ka baxsan waxaa is kale dadka gobalka heysto, tuula iyo degma kasta iyaga ayaa geeyaan ganacsiga.
Dhacdooyinka ugu yaabka badan waxaa ka mid ah , gawaari rakaab ah ayaa waxay ka baxeen degmada Afmadow , waxayna ku sii jeedeen Magaalada Muqdisho, Jillib markaay marayaan ayaa waxaa lagu amray in ay rarka dhigaan oo ay ku wareejiyaan gawaari ganacsi oo laga leeyahay Muqdisho. Halka kuwa ka yimid Muqdisho ay toos u tagaan Diif iyo Dhoobley ilaa xeryaha qaxootiga Kenya.
In Odey ka yimid miyiga gobalada dhexe uu ka dhawaaqo idaacadaha oo uu ku dooda shacabkeygi baa dowlada Kenya ku xasuuqeysaa gobalada Jubboyinka ama in mid kaas lamid ah uu isku Magacaabo Madaxweynaha Jubaland state ,Waxay marqaati u tahay sida kooxahani dhulka isu laheysiiyeen oo ay uga go’antahay dhul boobka.
Xuduuda dhulka Absame iyo Adeerkood waa Mundul baraawe ilaa Madoogaashe.
Hadaba Waxaa is weydiin Mudan aaway dadkii dhulka u dhashay ee Absame iyo Adeerkood? Ugu horeyn aduunka aan ku noolnahay dadka waxa kala hagaya waa hogaan suuban iyo nidaam iyo kala dambeyn. Bulsha kasta waxay leedahay hogaan adag oo Jiidka toosan ku haga jiilka cusub ee soo koraya isla markaasina ka gilgisha Khatar kasta oo bulshada ay matalaan ku soo fooleh, bulshada keeda qaldan qabta kan toosana sii guubaabiya.
Hadaba dadka u dhashay Jubboyinka waxay ka dhinteen waa hogaan la’aan.
Malaha hogaan dhaqameed wax tarleh ama danba kaleh shacabka iyo dhulka.
Malaha aqoon yahan ka damqanaya bulshadan baaba’san iyo dhulkan la boobaya.
Malaha bulsha karti leh oo isku duuban, Somali waxay ku maahmaahde Ratiga dambe ka hore saan qaadkiisuu leeyahay, bulsha hogaankeediiba baaba’yahay iyaguna waay iska baaba’ayaan. sababtoo ah dadkii ay ku deyen lahaayeen ayaaba waxaan jirinba ah.
Tusaalana waxaaba inoogu filan horumar la’aanta ka jirta degmooyinka yar ee dadka gobalka u dhashay ay ku soo hareen, kuligood waa wada baa,ba. Magaalada Kismaayo oo duul kasta dhiste marka laga reebo dhamaan degmooyinka labada Jubbo waa iska Ona laga guurey, qaarkood xitaa telefon malan, iskoola , isbitaalo iyo dhamaan noloshi aas-aasiga.
Ugu dambeyn Bulshada gobalka u dhalatay dal iyo dibadba waxaa la ogeysiinayaa in dal iyo dad midna aysan gacanta ugu jirin , dalkiina waa la dhacay oo dadbaa xoog ku heystaa, dadkiina waxay karooran yihiin oo hooy u noqotay Xeryaha Qaxootiga Kenya.
Gunimada intaasi la eg ee maanta ku hamsatay beeshan u nasab sheegata Jubbooyinka waxaa keliya oo laga bixi karo waa midnomo, hadii taasi la waayo waxaa dhici doonta in 10-ka sano ee soo socota la isku qabsado Garissa iyo Wajir, waayo gobalka Gedo markii la qabsade haduu Absame ka dhiidhin lahaa Maanta Kismaayo iyo Jubboyinka lama soo haweysteen. Baardheer,Sarinleey ,Faafaxdhuun,Garileey iyo Luuq inta la qabsade ayuu Absame aayar iska aamusay oo maxaas tiisi gacmaha soo qabsade, ilaa ay maanta ka soo dabar go’aan , haatana Jubboyinka oo intii badneyd la soo qabsade ayuu xaalka marayaa, waxaana ku xigi doona NFD, Hadii Xaalka sida uu yahay aan wax laga badelin Absame iyo Adeerkoodana aysan u diyaar garoobin dagaal gobanimo doon Min dhoobley Ilaa Sarinleey.
Maxaa yeelay Absame Maanta heer waxuu marayaa in Idaacadaha ay ka caayaan Adoontii Gumeystahii Talyaaniga Soomaaliya Kenay oo ay yiraahdaan Absame dhulka Uma dhalanin, Yamyam iyo Qadaadweyn iyo yeeyda kale ee wax ku raadineysa nidaamka ku qabso ku qadi meyside. Nin galgaduud ka soo duulay ayaa maanta ka hadlayaa Hoosingow iyo cirifka xuduuda Kenya la wadaagto somaliya isla markaasina haweyste Madaxweyne nimada Jubaland State.
Waxaa Xusid Mudan 6-da boqol ee kun ee ku xareysan xeryaha qaxootiga Kenya 485- kun in ay yihiin dadkii laga barakiciyay Jubboyinka .
10 Responses for “Dhoohanaanta Absame iyo Dhul balaarsiga beelaha iyo kooxaha shaarka diinta huwan ee ku soo duulay gobalada Jubboyinka,(Warbixin Muhiim ah)”
madaale says:	02/02/2012 at 6:24 am	waxaan odhan lahaa yaa buuqa kufuray maamulka azaania kuwa ku dhiiragaliyay ee kuyidhi soomaalida waxbakama jiraan sawma ahayn no 1 one waxay ahaayeen kuwa qora waxa ayna garanayn in badana waa la idiin aqliceliyay waana la idin waaniyay laakiin waxaa layidhi ninkii walaalkii nacaa nasiibdaraa udanbaysa wali rajo ayaa jirta laakiin kuwa marwalba dadka kalaqaada waakuwa qora waamonews/wabishabeele/ kismayonews/somali state/xaajo/iyo kuwakale hakeenina siyaasada kajirta ogaden ama soomaaligalbeed ufikira si ilbaxnimoleh hana isku khaldina ogaden iyo jubaland waad mahadsantihiin
Ali Zubeer says:	02/02/2012 at 8:39 am	Suaasha u baahan jawaab waxaa weeye yaa masuul ka ah jaban 60dan jirsadey?
Ma beelaha Qaarkooda?
Ma dabeecadda shaqo iyo nolol ee beesha Absame iyo adeerkooda gilimays?
Ma shisheeye iyo dawladahii soo marey dalka?
Ma qurba joogta jiifta daaraha dhaadheer ee caydha iska cuna?
Ma habka loo tarbiyey dadka degaankaa?
Ma NGOyada weerartay degaannada?
Ma UN-ta iwm miyaa?
Waa dood furan inkasta oo Waamonews group isku dayeen inay ka jawaabaan walxaha qaarkood haddana waxay u baahan tahay lafa gurid xoog badan iyo dhirin dhirin eex ka fog laakiin u baahan in daaha laga qaado.
Cali Zubeer waa uu daah furay doodda rayigiisana waa uu dib dhiganayaa. Shaki waxaan ku jirin in meelo kooban salka la geli doonto beelo sheegidna iman karto.
Dood wadaaggu waa furan tahay ee nin walbow adiga iyo aashaada.
kaligi-wiil says:	02/02/2012 at 8:54 am	Ali yare intaa ad sheegtay waa run lakin yaa mas.uul ka ah qilaafka,hungurixumiida,tala xumiida,kaligi wax ismoodka,xiinka iyo xasaadnimada sokeye, waa reer cabdulle. reer warfa ee walaalow reer Warfa dhiibka tolka haa ka dayan.tusale hada dhoobley ayeey joogan dadka baad ayeey ka qadan guud ahaan sookeyaha waxa ugu daran daka ay dhiibka ku hayan waa JIdwaaq, Jidwaaqna waa uu ka xishonay inuu manta dhoobley ku soo wererow . waayo wax badan ayaa jidwaaq lagu edeeye inu didan yahay Absamanimida, balse sanadka bal haa laa arka M subeer iyo Warfakisa, dhacdooyinka ugu dambeyey ee ka dhoobley waxaa ugu dambeysay Gariga Haji Bare weyne oo Rer Xagar iyo ragi watayba in 5 casho Lagu haystay dhoobley ka dibna baad laga qadatay halka gariga xamar ka imanay ee aad sheegeysa aan lala hadlin. Bishi hore sido kale waxaa sii maak ah loo diilay wil rer xagar ah oo ka mid ahaa cidanka raskamooninta waxaa sii ula kac uu togtay isla cidanka Ahmde madobe sagaro sagaro uma hartinin. marka side dadka nooca ah wax loola qabsan kara
kamsuuma says:	02/02/2012 at 10:57 am	Warku waa gaaban yahay waxaan aad sheegeyso wariye Cali waxaa looga bixi karaa in Prof. Gaandhi iyo General Axmed Islam (madoobe) ay gacmaha is qabsadaan hal barnaamij-na ay la yimaadaan.
Samadoon says:	02/02/2012 at 12:15 pm	Hadii cirka uu daruuraha ka mashquulo ma wa mashaqe ogaada!
Hadde cirka haduu ceyrsado daruuraha malaha waalni baa cirka la soo daristay soo ma aha?
Daruuraha hala ceeyrshe talow meel aan cirkan ahayn oo ay qabtaan miyey jirtaa?
Sikasto oo talada loo rogrago waa in lala socdo in dadku ay wada somali yihiin.
Somalina isku qasbantahay in ay xidid iyo xigaal iyo oodwadaag noqdaan wax waliba oo jiro.
Xalka jiro waxa weeye in aynan ku mashquulin waxaanan waxba inagu soo kordhin karin.
Waa in aynu usoo qalabqaadano sidii xal loogu heli lahaa somali oo idil.
Wax waliba uu Absame doonayo wuxu ka dhex heli karaa isagoo u halgama danta guud .
Dagaal sokeeye oo aynu maanta iclaamino ma aha mid aynu ku hanan karo masiirka gobolka.
Waa in aynu Xalka guud ee Somaliyeed aynu qeyb libaax ka qaadano.
oo sidaasi xal waaro loo helo oo keeno in xal laga gaaro mashaqooyinka gaamuurtoobay.
wiil dooy says:	02/02/2012 at 2:48 pm	aniga waxey ilatahay dhibka meeshuu ka jiro waa hogaanka dhaqanka oo kaalintooda gabay fadhiid fowqal fadhiid wax matarayaal ah/ kaba darane barkood dhuuni qaateyaal dhulka iibsade waaye/ ku darsoo kala jebiye beesha una nacamleeya cadowga. kuwaas dadka allaha ka fariisiiyo/
galti says:	02/02/2012 at 3:24 pm	dooye aad ayaad ugu talax tagatay odaydhaqameedkeenii wax soo reeeb
tankale waxaan qabaa eeda waan wada leenahaye aynaan cidgaar ah saarin hadaan sii sharaxo
absame&adeerkood waxaan ogaaday daraasad dheer ka dib waxay ka fiirsadaan mowqifkooda oo macadeeyaan marka laga reebo sh axmed madoobe iyo in yaroo la socota waxaynu isleenahay amuu wax isbadalaa hadaad cadayso fikirkaaga waana fulaynimo mar mar waa loo baahanyahay qar iska tuurnimadee aynu cadayno waxaan qabno caalkuna taasuu kugu taageeriye hadii kale waa laguu hadli rag aamusay&riyo aamusayba reerkoodii way gabeen by galtiwaamo
KENADID says:	03/02/2012 at 3:54 pm	WIXII IDINSOO MARAY HA IDIIN NOQDEEN WAAYA ARAGNIMO QORAALADAN OO KALENA KA SAMEEYA KALA SOO BAXA XALKII IYO INAAD KA FOOJIGNAATAAN TALO MIDEESAN IYO CUDUD MIDEESAN AYAAD WAXNA KU NAQON KARTAAN MELNA KU GAADHI KARTAAN DEEGAANKIINA SCHOOLO ; ISBITAALO; BIYO GALIN; JIDAD USAMEESTA IDINKA AYAA WAX QABSAN KARA DHULKA UGU BARWAAQADA BADAN AYUU ALLE IDIINKU DEEQAY HA NOQONINA [; DAQONI CALAF MALAHA ]” WABILLAAHI TAWFIIQ
Nuur says:	04/02/2012 at 2:10 am	KU Jawaab ku socota Kiligii-wiil ama Saalax.
Saalaxoow horta waad ceeboowday , malaha Norwey yaad ku dhex waalatay ,har iyo habeena waxaad shaqa kadhigatay kala qeybinta absame. Beenaale tuug ah oon allaah iyo islaam midna ka xishooneynin baatahay . Jidwaaq iyo Ogaden walala weye, reer cabdile iyo jifada hoose ee reer warfaa inaad ka hadashana waa kugu ceeb.
Waxaad tahay nin weyn oo magaca bartire ceebeeyay , maraad tiraahdo Xagar baa mapka jubaland laga saaray iyo maraad ka dhex shaqeyso isku dirka Absame dhexdiisa. Dhoobley warka aad ka sheegi wax ka jiro malaha ninkii dambi galana sharciga la horkeeni qabiilkuu doona haka soo jeedo.
Saalax waan ku ognahay inaad Alshabaab la shaqeyso, wax alaalw waxaad bartire ka tahayna majiro , tuug tiftif ah ,dadka koofiyadaada weyn kolkey arkaan bay ku moodaan qof quman. Norway ban ceebtaada la joogi wayne fadhi ku dirirkaad noogu darte.
calaa kulixaal ku ekoow gurigaaga OSLO . nin 22 karle juhanes gate jooga dhobley ma haboona inuu ku mashquulo.
liqaaye says:	24/10/2012 at 9:53 pm	ASC, dhamantin
TO kaligii wiil sxb horta dhibka Absame haysta waa noocyo badan yhy lkin qayb kamid ah waa cuqdada ay qaban dad tiro yar oo kula mid ah. Noocaga oo kalena waa kuwa dib udhaca kuriday Absame kuna kalifay inay iyagu isku mashqulan. Reer warfaa aad sheegayso ma hogaanka iyo hormuudka uu absame u horseeday miyuu eeday? Anigu waan soo dhawaynaya Fikrada Ahmed madoobe iyo inta lafikirka ah cidaydoonan hanoqdaan Absame. Gaandi iyo Ahmed Madoobe iyo inta tagertaba wan soo dhawaynaya, in lamidoobana wan soo dhawaynaya. Iskudaya inad midawdaan cadowgiina wuu badan yahay, waxa kalood iskudaydan inad si cad-cad oo aan gabasho lahayn u cabirtan ra’yigiina idinkoo meelkasta kamujinhaya. Waxa rer somalia halkas dhigay waa maskiinimada iyo iyagoon lahayn hal siyaasi ah oo kajawaabo idaacadaha marka raga kale ee somaliyeed ay maalinkasta ka goodinhayan media ha. War fadhiga ka kaca oo dhulka hala xoreeyo hana la iskuduubnaado. FINALLY, hadii aan ufikirno sida dadka maangaabka ah oo aan hadafka dheer lahayn in ay kumashqulan Absame dhexdiisa mooyan, waxan kudhici doonaa godod kawayn mida maanta jirta.
Ali Zubeer: How you celebrate without knowing the achievement of his trip? guulwadaynta qaar waa lagu dulloobaa Jubba...
balqis bosaaso: qaraxyada umadii wadno qabad iyo argagax ku noqday ala maanta hadii qaraxaas kismaayo ka dhici lahaa...
balqis bosaaso: oo kaalay maxaa adigan sayid wataah magaca madaxweynaha jubbaland dusha kuu saaray mid kale ma weydey...
Darwish: waad mahad santahay walaal mxamed wa c/lahi cilkayare
farhan: Waxay caawa ku dhawaaqeen odayaashii hawiye iney iyagu leeyihiin xamar oo aan cidkale wax ku laheen.
Khasaaraha ka dhashay Qaraxyadii Maanta lagu weeraray Xarunta UNPD ee Muqdisho(Daawo)
Gudoomiyaha Jowhar oo Carooday Xasuuqa lagu eedeeyay ee Maamulkiisa uu ku hayo beesha Jareerweyne (Dhageyso)